ဟာသလေးတွေမျဝေပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Other - Non Channelized » ဟာသလေးတွေမျဝေပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ
“ငါ့ သတိုးသမီး ဘယ်ရောက်သွားလဲ?”
“ဟင့်… သူများ အင်္ကျီချွတ်လိုက်တာနဲ့ သူများကို မမှတ်မိတော့ဘူးလားတဲ့!”
“အချစ်က လှပရုံတင်မကဘူး မူးယစ်စေတယ်၊ ကြေကွဲစေတယ်၊ မျက်ရည်ကျစေတယ်၊ ဟင်း!
မင်းကွာ… ကြက်သွန်နီကိုမှ သွားချစ်မိတယ်လို့!”
ခြင်ကလေး “အီး..ဟီး.. ဖေဖေသေသွားပြီ!”
ခြင်မေမေ “ဟင်း… ဖေဖေက သားနဲ့အတူ စတိတ်ရှိုးသွားကြည့်တာ မဟုတ်လား!”
ခြင်ကလေး “ဟုတ်တယ်.. ပရိသတ်လက်ခုပ်တီးတဲ့အချိန် ဖေဖေမရှောင်ခဲ့ဘူး…”
“နင့်ကိုငါ စိတ်ညစ်အောင်လုပ်တာတောင် နင်ပြန်မငြင်းခဲ့ဘူးနော်!
နင့်ဒေါသကို နင်ဘယ်လို ထိန်းခဲ့တာလဲ!”
“ထူးတာပေါ့။ နင့်ရဲ့သွားတိုက်တံနဲ့ ဆေးတာလေ”
ဆရာက ကျောင်းသားတွေကို KFCရဲ့ကြော်ငြာဖြစ်တဲ့ “We do chicken right”ကို
ဘာသာပြန်ထားကြတာတွေ့ရတယ်။ သူတို့ ဘာသာပြန်ထားတာတွေက…
(၉) ကြက်ရှိတယ်… ညာကြည့်ပါ